Ukuze umsebenzi ukhululekile ngesikhathi ikhompyutha, ukuze amehlo musa sikhathale, ngezinye izikhathi ufuna ukushintsha ezinye nemingcele kwesikrini. Esinye salezo kuyinto ukukhanya. Cabangela izindlela ezimbalwa ezivumela ukuba baqonde indlela ukulungisa ukugqama ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 7 ukuthatha kuphela njengesibonelo imvelo operating system ukusebenza).
Ukulungiselelwa okuzenzakalelayo of ukukhanya kwesikrini kungakhathaliseki uhlelo
Ukusetha imingcele edingekayo kumele ahlukaniswe tangcondvomshini ngokuya amadivayisi abo.
Ngo umile PC qapha wumkhakha ahlukile, ngakho ke ulungise ukukhanya kwesikrini e-Windows 7 noma yiluphi olunye uhlelo Awenzanga okhiye ezikhethekile ezenziwe ngaphambili noma side panel, noma imenyu yawo kuphela, okuthiwa ku qapha.
Isikrini laptop kuyingxenye ebalulekile isakhiwo sonke, futhi izilungiselelo wazifunela izinkinobho akuyona. Isilungiselelo eyenziwa usebenzisa izinqamuleli zekhibhodi. Ezimweni eziningi, njengoba isikhulumi eyisihluthulelo FN ukhiye. Ngaphezu umsebenzi walo okhiye ingasetshenziswa (F1-12), / phansi, kwesokunxele / kwesokudla nezinye inhlanganisela.
Ukuze ulungise ukukhanya kukhompyutha yakho (i-Windows 7) esebenzisa okomuntu siqu?
Njengoba for izilungiselelo igama usebenzisa izimali siqu-Windows 7, zikhona ongakhetha eziningana eziyisisekelo. Futhi kufanele kuqale ngokwezifiso.
Ukuze ulungise ukukhanya kukhompyutha yakho? Windows 7 enikeza ukufinyelela okusheshayo nemingcele main, okuyinto kuveza ngokucindezela kwesokudla endaweni ezingenalutho "Ideskithophu". Esikhathini ewindini elisha uzobona eziningi izici ngokwezifiso, lapho ungakhetha kulungiselelwa oyifunayo.
Indlela ulungise ukukhanya computer (i-Windows 7) usebenzisa amandla izikimu?
Hhayi ngaphansi kuka indlela elula iwukuba ukushintsha izilungiselelo ipharamitha elifiswayo Ukukhethwa wesifunda ugesi. Ukufinyelela lokhu sigaba amadeskithophu ingatholakala kusukela "Control Panel", futhi laptops kwanele ukusebenzisa ngokuchofoza kwesokudla uphawu lwebhethri kuthreyi yesistimu. Ngo-Windows 7, ushintsho kuzokwenzeka kahle esigabeni zisithakazelise (kule nguqulo lweshumi kulungiselelwa ukugqama zingenziwa ngokuqondile imenyu Ukushayela kwezindlela).
Ukuze ulungise ukukhanya kukhompyutha yakho (i-Windows 7) ngale ndlela? elula kakhulu. Udinga ukukhetha ubize izinketho eziningi isikimu oyifunayo. Kube izokwethulwa ezimbalwa ongakhetha eziyisisekelo. ngezansi nje kulungiselelwa eyinhloko isinciphisi ekhethekile, okuyinto ikuvumela ukuba ulungise ukukhanya isibonisi.
Futhi, ukulungiswa esiyolandelwa ngaphansi "Isikrini" elimelela isibonisi vimbela inketho ngokuvamile sisetshenziswa esimweni sokungasebenzi isikhathi eside kohlelo noma eziqhutshwa, imodi yokulala (basebusika).
Ukusebenzisa inhlangano adapters ingcaca
Enye indlela ezithakazelisayo ukuze uqonde ukuthi ukuze ulungise ukukhanya kwesikrini ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 7), ukusetshenziswa amathuluzi ezikhethekile kanye ihluzo ukuphathwa software, okuyinto ngokuvamile isethelwe ihluzo amakhadi ekuqaleni. Ezimweni eziningi, lokhu kusebenza amakhadi NVIDIA, futhi ATI Radeon.
Lezi zicelo futhi Ukufinyelela okusheshayo izilungiselelo ngandlela-thile indlela ehlukile amathuluzi Windows-izinhlelo futhi ngokuvamile uvumele ngaphezulu ukuhleleka okuhle ne enwetshiwe sici isethi, okuyinto kumasistimu ezivamile kumane lingekho.
Yiqiniso, uma asikhulumi mayelana ngokwezifiso enwetshiwe, indlela elula ukulungisa ukugqama, nezinye izilungiselelo bazimele abekho uhlelo noma ividiyo izindlela. Kodwa uma udinga ngaphezulu ukuhleleka okuhle, kubalulekile ukuqhathanisa izici Windows namathuluzi semininingwane namathuluzi adapters ingcaca. Kunoma ikuphi, bona Lingase lisetshenziselwe ngokulinganisa.
Ukukhipha i-Windows 7 izibuyekezo nge umugqa wemiyalo
Kuthiwani uma i-computer amvalele phansi
Uhlelo lokusebenza kuhlanganisa amaphasela software elandelayo bese ... (ohlwini)